ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog
( နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၅/၉၂ )
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁ ရက်
(၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်)
၁။ ဤဥပဒေကို ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(က) ငွေစုဘဏ် ဆိုသည်မှာ ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းနှင့် ငွေစုလက်မှတ် ရောင်းချခြင်းလုပ် ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံပိုင် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကား ရပ်တွင် ငွေစုဘဏ်ခွဲနှင့် ငွေစုဘဏ်ရုံးခွဲတို့လည်းပါဝင်သည်၊
(ခ) ငွေစုသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်စုဆောင်းသူ သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ် ဝယ်ယူစုဆောင်းသူကိုဆိုသည်၊
(ဂ) စုငွေ ဆိုသည်မှာ ငွေစုဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းအပ်နှံငွေ သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ်ဝယ်ယူစုဆောင်း ငွေကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ငွေစုမှတ်တမ်း ဆိုသည်မှာ ငွေစုဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းအပ်နှံငွေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငွေစုသူအား ငွေ စုဘဏ်က ထုတ်ပေးထားသော စာအုပ်၊ လက်မှတ် သို့မဟုတ် ကတ်ပြားကို ဆိုသည်၊
(င) အရွယ်မရောက်သေးသူ ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသူကို ဆိုသည်၊
(စ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
၃။ ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပြည်သူများ၏ ချွေတာစုဆောင်းခြင်း အလေ့အထကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်၊
(ခ) လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေစုနည်းဖြင့် စုဆောင်းကြစေရန်၊
(ဂ) ငွေအရင်းအနှီး စုဆောင်းခြင်း အလေ့အထ တိုးတက်စေရန်၊
(ဃ) ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။
ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငွေစုလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း
၄။ အရွယ်ရောက်သူမည်သူမဆို မိမိအတွက် ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငွေစုလက်မှတ် ဝယ်ယူခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၅။ အရွယ်ရောက်သူသည် အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက်-
(က) ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်၊
(ခ) ငွေစုလက်မှတ် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ငွေစုလက်မှတ် တစ်ခုဝယ်ယူရာတွင် အရွယ်မရောက် သေးသူ နှစ်ဦးထက်မပိုစေရ။
၆။ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုသော အရွယ်ရောက်သူများသည် တွဲဖက်၍ ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ် ခြင်း၊ ငွေစုလက်မှတ် ဝယ်ယူခြင်းပြုနိုင်သည်။
၇။ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ပိုင် ရန်ပုံငွေများကို ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ငွေစုလက် မှတ် ဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်းပြုနိုင်သည်-
(က) ချွေတာစုဆောင်းရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊
(င) အသင်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ၊
(စ) တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များ၊
(ဆ) ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ခွင့်ပြုသော အဖွဲ့အစည်းများ။
၈။ အာမခံတင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံတောင်းဆိုသည့်ဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အ စည်း၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အာမခံတင်သွင်းရမည့်ငွေအတွက် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငွေစုလက် မှတ်ဝယ်ယူခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၉။ မည်သူမျှ နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေကြေးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်က ငွေကြေးထည့်ဝင်ထားသော အဖွဲ့အစည်း ပိုင် ငွေကြေးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ငွေစုဘဏ် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ်ဝယ်ယူခွင့် မရှိစေရ။
(က) ငွေစုဘဏ်က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့်အတိုး ငွေများ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေစုဘဏ်စာရင်းကို ဖြစ်စေ၊ ငွေစုလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ အခြားငွေစုဘဏ် ရုံးခွဲ တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ) အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက် ဝယ်ယူထားသော ငွေစုလက်မှတ်မှတစ်ပါး အခြားသောငွေစုလက် မှတ်ကို ဝယ်ယူပြီး၁နှစ်ပြည့်သည့်အခါ အခြားသူတစ်ဦးဦးသို့ ဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေး ခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ) ငွေစုလက်မှတ်ကို ဝယ်ယူပြီး ၁ နှစ်ပြည့်သည့်အခါ ငွေထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်၊
(င) အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်ပါက မိမိအတွက်စုငွေကို မိမိအရွယ်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ကိုယ်တိုင် ငွေ ထုတ်ယူပိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(စ) ပုဒ်မ ၆ အရ တွဲဖက်၍ ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ် ဝယ်ယူထား ခြင်းဖြစ်ပါက တစ်ဦးဦးသေဆုံးလျှင် ကျန်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ကျန်ရှိသူများက ငွေထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်၊
(ဆ) ငွေစုမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ် ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ကာ အသစ်ထုတ်ပေးရန် တောင်း ခံခွင့်ရှိသည်။
၁၁။ ငွေစုသူသည် ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်အခါ မိမိ၏စုငွေနှင့်အတိုးခံစားခွင့်များကို မိမိလွှဲပြောင်းလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲအပ်ထားနိုင်သည်။
၁၂။ ငွေစုသူသည် မိမိအကျိုးခံစားခွင့်လွှဲအပ်ထားခြင်းခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ပြင်ဆင်လိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာငွေစုဘဏ်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင်သည်။
(က) ငွေစုမှတ်တမ်းနှင့် ငွေစုလက်မှတ်တို့ကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်၊ ပျောက်ဆုံးပါက ဘဏ်သို့ အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရမည်၊
(ခ) ငွေစုမှတ်တမ်းကိုဖြစ်စေ၊ ငွေစုလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ မိမိက ပေါ့လျော့စွာ ထားရှိခြင်းကြောင့် တစ်ဦး တစ်ယောက် သောသူကရရှိပြီး လိမ်လည်ငွေထုတ်ယူသွားခြင်း အတွက် မိမိတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊
(ဂ) စုငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်ကတစ်နည်းနည်းဖြင့် ပိုမိုထုတ်ပေးခဲ့သော ငွေကို ဘဏ်သို့ မပျက်မကွက် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်၊
(ဃ) ငွေစုမှတ်တမ်းတွင် ပါရှိသော ဘဏ်၏ တရားဝင်ရေးသွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းနေ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက ဘဏ်သို့အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ရမည်။
ငွေစုဘဏ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၄။ ငွေစုဘဏ်သည် လုံလောက်သော အကြောင်းရှိပါက-
(က) ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးရန် သို့မဟုတ် ငွေစုလက်မှတ် ဝယ်ယူခွင့်ပြုရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည်၊
(ခ) ဖွင့်လှစ်ထားပြီးသော ငွေစုဘဏ်စာရင်းကို ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချထားပြီးသော ငွေစုလက် မှတ်ကို ငွေပြန်အမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။
၁၅။ ငွေစုဘဏ်သည် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်စုဆောင်းငွေအပေါ် ပေးမည့်အတိုးနှုန်းနှင့် တွက်ချက် သည့်နည်းလမ်းများ၊ ဝယ်ယူပြီး ၁ နှစ် ပြည့်တိုင်း ငွေစုလက်မှတ်အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် ပေးမည့် အတိုးငွေပါဝင်သော တိုးရင်းဇယားတို့ကို အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ကြေညာရမည်။
၁၆။ ငွေစုဘဏ်သည် အောက်ပါတို့ကို အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်-
(က) ငွေစုဘဏ်စာရင်းတွင် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံးထားနိုင်ခွင့်ရှိသည့် လက်ကျန်ငွေပမာဏ၊
(ခ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက အများဆုံးဝယ်ယူခွင့် ရှိသော ငွေစုလက်မှတ်ပမာဏ၊
(ဂ) ငွေစုလက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့် သက်တမ်း။
၁၇။ ငွေစုဘဏ်သည် ငွေစုလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူပြီး ၁ နှစ် မပြည့်သေးသော်လည်း အောက်ပါအခြေအ နေများ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခါ အတိုးမဲ့ငွေထုတ်ပေးနိုင်သည်-
(က) ငွေစုသူသေဆုံး၍ အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက တောင်းဆိုသည့်အခါ၊
(ခ) အများဆုံးဝယ်ယူနိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သဖြင့် ငွေစုဘဏ်က ပြန်လည်ထုတ်ယူစေ သည့်အခါ ၊
(ဂ) အာမခံတင်သွင်းထားသော ငွေစုလက်မှတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာမှအာမခံ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု သည့်အခါ သို့မဟုတ် အာမခံ ဖောက်ဖျက်၍ သက်ဆိုင်ရာမှ တောင်းဆိုသည့်အခါ၊
(ဃ) ငွေစုသူပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ၊
(င) ငွေစုသူနိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားမည် ဖြစ်သည့်အခါ၊
(စ) တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူက တရားရုံး၏အမိန့်အရ ငွေထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ၊
(ဆ) ငွေစုသူအနေဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြောင့် သို့မဟုတ် မလွှဲမရှောင်သာသော အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ။
(က) ငွေစုမှတ်တမ်းနှင့်ငွေစုလက်မှတ်တို့တွင် အမည်ပေါက်သူကိုသာ စုငွေပိုင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ရမည်။ ယင်းစုငွေပိုင်ရှင်ကိုသာ ငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုရမည်၊
(ခ) ငွေစုသူသေဆုံးသည့်အခါ အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲအပ်ထားခြင်းခံရသူအား ငွေထုတ်ပေးရမည်။ ယင်း ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ကန့်ကွက်ချက်ကိုမျှ လက်ခံစဉ်းစားခြင်းမပြုရ၊
(ဂ) အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲအပ်ထားခြင်းမရှိသော ငွေစုသူသေဆုံးပါက စုငွေလက်ကျန်ကိုအမွေထိန်းစာ လက်မှတ် သို့မဟုတ် အမွေဆက်ခံခွင့်လက်မှတ် တင်ပြရန်မလိုဘဲ ငွေစုဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြနိုင်သူ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ တရားဝင် မွေးစားထားသော သားသမီး သို့မဟုတ် ယင်းတို့မရှိလျှင် မြေး သို့မဟုတ် ယင်းတို့မရှိလျှင် မိဘ၊ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမအား ထုတ်ပေးရမည်။
(ဃ) ငွေစုသူတစ်ဦး ရူးသွပ်သွားသည့်အခါ တွင်ဖြစ်စေ၊အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မိမိ၏ အမှုကိစ္စ များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ ၎င်းအား တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ် သူကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း စုငွေထုတ်ပေးရမည်၊
(င) ငွေစုသူသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို လိုက်နာရသော စစ်မှုထမ်းဖြစ်ပါက ၎င်းသေ ဆုံးသည့် အခါ သို့မဟုတ် တပ်မှထွက်ပြေးသည့်အခါ သို့မဟုတ် အမှန်ရူးသွပ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထား သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း စုံစမ်းသိရှိရသည့်အခါ သို့မဟုတ် တန်းပြည့် စစ်မှုထမ်းချိန်တွင် ပျောက်ဆုံးနေ သည်ဟု အကြောင်းကြားခြင်းခံရသည့်အခါ အဆိုပါစစ်မှုထမ်းသည် အရာရှိဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က တောင်းခံလျှင်ဖြစ်စေ၊ အရာရှိမဟုတ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာတပ်ရင်းမှူးက တောင်းခံလျှင်ဖြစ် စေ စုငွေလက်ကျန်နှင့် ကျသင့်သောအတိုးငွေများ ထုတ်ပေးရမည်၊
(စ) အရွယ်မရောက်သေးသူက မိမိအတွက်စုငွေကို ကိုယ်တိုင် ငွေထုတ်ယူလိုကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါက ထိုသူအရွယ်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုရမည်။
၁၉။ ပုဒ်မ ၁၈ အရ ငွေထုတ်ပေးပြီးသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငွေစုဘဏ်တွင် နောက်ထပ်တာဝန်မ ရှိ စေရ။
၂၀။ ငွေစုဘဏ်သည် မိမိ၏ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ငွေစုသူတွင် ပေါ်ပေါက်ရသော ငွေကြေးနစ်နာဆုံးရှုံးမှု များအတွက် တာဝန်ရှိစေရမည်။
၂၁။ ငွေစုဘဏ်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ယာယီတားမြစ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှတစ်ပါး ငွေစုသူ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲအပ်ထားခြင်း ခံရသူအားငွေထုတ်ပေးရန်ငြင်းဆိုခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်းမပြုရ။
၂၂။ ငွေစုဘဏ်သည် စုငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပိုမိုထုတ်ပေးခဲ့သောငွေများကို ငွေစုသူက ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ယင်းငွေများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ခုနှိမ်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် မြေ ခွန်မပြေ ကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရကောက်ခံခြင်းပြုနိုင်သည်။
၂၃။ မည်သူမျှ ငွေစုမှတ်တမ်းတွင်ပါရှိသော ဘဏ်၏ တရားဝင်ရေးသွင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ပြင် ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း မပြုရ။
၂၄။ မည်သူမျှ ငွေစုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ငွေစုမှတ်တမ်းကို ဖြစ်စေ၊ ငွေစုလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ တစ် နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ။
၂၅။ မည်သည့်ငွေစုဘဏ်ဝန်ထမ်းမဆို ငွေစုသူ၏အမည်၊စာရင်းအမှတ်၊ စုငွေ၊ ထုတ်ငွေ၊ စုငွေလက်ကျန် ပမာဏတို့ကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ကြည့်ရှုစေခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာခြင်းမပြုရ။
၂၆။ မည်သူမျှ စုငွေတစ်စုံတစ်ရာကို လိမ်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ ယင်းသို့ထုတ်ယူရန် ကြိုးစားအားထုတ် ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်း၊ ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းမပြုရ။
၂၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ၂၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအားထောင်ဒဏ်၃ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ် စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၈။ ငွေစုဘဏ်ဝန်ထမ်းသည် ပုဒ်မ ၂၅ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုဝန်ထမ်းအား ထောင်ဒဏ်၃နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ၂၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်မှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်။ ထို့ပြင် သက်သေခံငွေနှင့် ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၃၀။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် နိုင်ငံပိုင် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်သည့် ငွေစုဘဏ်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။
၃၁။ ငွေစုဘဏ်စာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူရာတွင် ဖြစ်စေ၊ ငွေစုလက်မှတ်များကို ငွေအဖြစ် လဲယူရာတွင်ဖြစ် စေ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိစေရမည်။ သို့ရာတွင် ချက်လက်မှတ်ကိုအသုံးပြု၍ ငွေစုဘဏ်စာ ရင်းမှ ငွေထုတ်ယူခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။
၃၃။ ငွေစုဘဏ်စာရင်းနှင့် ငွေစုလက်မှတ်မှ ရရှိသည့်အတိုးငွေအပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန်သော်လည်းကောင်း၊ အမြတ်ခွန်သော်လည်းကောင်းကောက်ခံခြင်းမပြုရ။ ထို့အပြင် ယင်းအတိုးရငွေကို အခွန်စည်းကြပ်ထိုက် သည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေ တွက်ချက်ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်းခြင်းမပြုရ။
၃၄။ ငွေစုဘဏ်စာရင်းသေ၏ လက်ကျန်ငွေကို ဘဏ်၏ဝင်ငွေအဖြစ် သတ်မှတ်၍ စာရင်းပြောင်းလဲခြင်း မပြုရ။
၃၅။ ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် ဥပဒေများအရ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေစုဘဏ်စာရင်းများ၊ဝယ်ယူ ထားသည့် ငွေစု လက်မှတ်များသည် ဤဥပဒေအရ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေစုဘဏ်စာရင်းများ၊ ဝယ်ယူ ထားသည့် ငွေစုလက်မှတ်များ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၆။ ငွေစုဘဏ်နှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲနည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊စည်းမျဉ်းများ၊ စည်း ကမ်းများ၊ အမိန့်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ကျင့် သုံးနိုင်သည်။
၃၇။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ငွေစုဘဏ်သည် လိုအပ်သောအမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၃၈။ အောက်ပါအက်ဥပဒေများကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်-
(က)The Government Savings Banks Act,1873.
(ခ)The Savings Certificates Act,1947.
Previous ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ
Next ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ